Su'aalaha la isweydiiyo - Aojie Mold Co., Ltd.
Isniin - Sabti 7:00 AM ilaa 9:00 AM
Qaybo Auto Auto
Alaabta Warshadaha Caaryada
Alaabta Qoyska Caaryada
Aqoon isweydaarsi & Qalab
Socodka Habka Caaryada
Shaxda Socodka Kormeerka Caaryada
S: Waa maxay adeegyada aad bixiso?
J: Waxaan soo saarnaa caaryada cirbadda caaga ah waxaanan soo saarnaa qaybo duritaan caag ah oo loogu talagalay sambal -qaadista iyo wax -soo -saarka weyn.Waxaan kaloo bixinnaa adeegyo naqshadaynta caaryada.
S: Sideen kula soo xiriiri karaa?
J: Waxaad noogu soo diri kartaa weydiin emayl, WhatsApp, Skype ama Wechat. Waxaan kuugu soo jawaabi doonaa 24 saacadood gudahood.
S: Sideen ku heli karaa oraah?
J: Kadib markaan helno RFQ -gaaga, waxaan kuugu soo jawaabi doonaa 2 saacadood gudahood. RFQ -gaaga, fadlan ku bixi macluumaadka iyo xogta soo socota si aan kuugu soo dirno qiimaynta tartanka iyada oo ku saleysan shuruudahaaga.) 2D sawirrada qaybta PDF ama qaabka JPG & qaybinta 3D ee UG, PRO/E, SOLIDWORKS, CATIA, CAD, STP, X_T, IGS, PRT, DWG, ama DXFb) Macluumaadka cusbi (Datasheet) c) Shuruudda tirada sanadlaha ah ee qaybaha
S: Maxaan yeeli doonaa haddii aanan haysan sawirro qayb ah?
J: Waxaad noo soo diri kartaa shaybaarkaaga qayb caag ah ama sawirro leh cabbir waxaanan ku siin karnaa xalkayaga farsamo. Waan abuuri doonaa.
S: Ma heli karnaa qaar ka mid ah shaybaarrada ka hor wax soo saarka ballaaran?
J: Haa, waxaan kuu soo diri doonaa shaybaarro si loo xaqiijiyo ka hor inta aan la bilaabin wax soo saarka ballaaran.
S: Sababtoo ah kala duwanaanshaha waqtiga ee Shiinaha iyo dibedda, sideen ku heli karaa macluumaad ku saabsan horumarka dalabkayga?
J: Toddobaad kasta waxaan u dirnaa warbixinta horumarka wax -soo -saarka toddobaadlaha ah oo wata sawirro dijital ah iyo fiidiyowyo muujinaya horumarka wax -soo -saarka.
S: Waa maxay wakhtigaaga hogaaminta?
J: Waqtigeena caadiga ah ee wax-soo-saarka caaryada waa 4 toddobaad.Qaybaha caagga ah waa 15-20 maalmood iyadoo ku xiran tirada.
S: Waa maxay muddada lacag bixintaadu?
J: 50% sida deebaajiga lacag bixinta, 50% dheelitirka waxaa la bixin doonaa ka hor dhoofinta. Qaddar yar, waxaan aqbalnaa Paypal, guddiga Paypal ayaa lagu dari doonaa amarka. Qaddar weyn, T/T ayaa la doorbidayaa
S: Sideen u dammaanad qaadi karaa tayadeena?
J: Inta lagu guda jiro samaynta caaryada, waxaan samaynaa qalab iyo kormeer qayb. Inta lagu jiro soosaarka qayb, waxaan samaynaa 100% kormeer tayo oo buuxa
ka hor intaanad baakadeyn oo diid qaybaha kasta oo aan waafaqsanayn heerkayaga tayada ama tayada uu oggolaaday macmiilkayagu.
Aojie Caaryada Co., Ltd.
Su'aalaha ku saabsan alaabtayada, fadlan noo dhaaf e-mailkaaga oo nala soo xiriir 24 saacadood gudahood.